ROOTIGA ROYAL: NOOCYO STRAWBERRY "QUEEN ELIZABETH" - STRAWBERRIES
Kala duwan ee strawberry "Queen Elizabeth"
Strawberry waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu jecel carruurta iyo dadka waaweyn.
Cimilada caleemaha guduudan waxay calaamad u tahay bilowga xagaaga, fasaxyada iyo fasaxyada.
In kasta oo xaqiiqda ah in dukaamada qaar ka mid ah alaabta this soo iibsan karaa wakhti kasta oo sanadka, dadka badankoodu waxay fahmaan in tani ma aha strawberry, laakiin natiijada shaqada ee warshadaha kiimikada.
Sidaa darteed, bannaanka u yihiin isku dayayaan in ay koraan ay duurka u gaar ah si aad u hesho goosashada weyn, si loo barafo qaar ka mid ah berry, iyo xilliga qaboobaha si ay u indulge naftooda leh bur saliid ama pies strawberry.
Noocyada ugu caansan ee strawberries (strawberries) waa kala duwanaanta Queen Elizabeth.
Guud ahaan, kuwan "Korolev" laba - "Queen Elizabeth I" iyo "Queen Elizabeth II". Fasalka labaad wuxuu ku dhow yahay kii ugu horreeyay, laakiin u dhexeeya iyaga waxaa jira hal farqi oo muhiim ah. The labaad ee "Queen" waa strawberry remontnaya, taas oo ah, ay duurka u dhali midho goor wakhti kasta, laga bilaabo guga iyo soo afjari bilawga xilliga dayrta. Laakiin marka hore "Queen" waxay u baahan tahay dherer qiyaas ah oo qorrax ah, taas oo ah, dhirta ayaa samaysan doonta miraha ilaa daqiiqad gaar ah illaa inta dherarka qoraxdu ka gudbaan marxalad gaar ah.
Hore ee "Queen Elizabeth" ayaa weli ah noocyo aad u caan ah, xitaa iyada oo kobcisa naftaada. Buundooyinka waa mid aad u awood badan, sida strawberries, caleemaha waa weyn, cagaar iftiin ah midabka.
In duurka fruiting tallaabo marka dhererka maalintii u gaaro 8 saacadood, iyo muddada geedi socodkan waa qiyaastii bil ah. Geedaha samee tiro badan oo jajaboo leh strawberry laftiisa ku dhuftay, caws ubaxa foomka taagan, waxay ku dhowaadaa qiyaastii heerka isku mid ah caleemaha.
Miraha waa mid aad u ballaaran oo qurux badan leh, qaab dhismeedka cufan, dusha sare ee dhoobada iyo qaabka caadiga ah ee strawberry. Miraha badankoodu waxay ku dhow yihiin isla muuqaalka iyo miisaanka.
Haddii aad si fiican u daryeeli duurka, ka dibna waxay siin karaan dalagyada noocaan ah, berrin kasta oo ay gaarto ilaa 40 g!
Haddii heerkulka xagaaga uusan aheyn mid aad u sarreeya, ka dibna kordhinta miraha ee xajmiga xitaa waxuuna qaadi karaa tufaax miisaanka celcelis ahaan - tani waa qiyaastii 100 g. Sida loo dhadhamiyo, markaa waa wax qurux badan, macmacaan.
Jirka ayaa leh caraf macaan, midab cas, mid aad u casiir leh iyo cufan. Wax-soo-saarka ayaa aad u sarreeyaGuga, waxaad soo ururin kartaa 1 kg oo ah nooca berry ah oo ka soo baxa hal warshad.
Midhaha ugu horreysa waa laga saari karaa beerta bilowga Juun, iyo haddii cimiladu ay aad u wanaagsan tahay, xittaa hore.
Mucaaradka caabiga ee kala duwan ee this waa at height, laakiin duurka u ah jiilaalka weli waa in la daboolo si ay caws ubaxa dayrta ma dhimanayso heerkulka hooseeyo.
Waxaa lagama maarmaan ah in la xusuusto in the transplantation of duurka waa in la sameeyo doorbiday sanadka, sababtoo ah tayada miro ku xiran tahay da'da da'da: sii dheer baadiyaha sii joogaya beerta, ka sii xun sii goosashada noqon doonaa.
Kaliya khasaare kala duwan ee noocyada kala duwan waa in ay lumiso inay raacdo - labaad "boqor". Midda labaad ee "Queen" ee 2 - 3 jeer, taas awgeed, dhalidda waxay noqon doontaa mid aad u sareysa.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan beerista iyo daryeelka ee strawberries.
Ku saabsan sifooyinka noocyada beeritaanka
Waxaa jira waqti badan oo lagu beero geedo strawberry. Waxaa ugu wanaagsan inaad geedo geedo ku dhexjirto muddadii u dhaxaysay July ilaa August, si dhirta ay si buuxda u qaadan karaan xididada furan. Haddii aanay suurtagal ahayn in strikberat prikopat ee xilligan, ka dibna tan waxaa la samayn karaa guga hore iyo dayrta, oo ku saabsan 15 - 20 maalmood ka hor bilawga ah ee dhaxan.
Geedo waa la iibsan karaa, sidoo kale waad ka soo bixi kartaa abuur ama shaarib. Mabda 'ahaan, nidaamka geedo sii kordhaya waa isku mid sida dalagyada kale. Geedo strawberry waxay u baahan yihiin nalal badan, kuleyl iyo qoyaan hawada, sidaas darteed waa inaad tan ka taxadartaa.
Sii joogso ilaalinta dheelitirka biyaha ee ciidda si ay xididada duurka dhalinyarada ma dareemayaan la'aanta biyo. Ka dib markii 20-25 maalmood, caleemaha ugu horeeya waa in ay ku muuqdaan sanduuqyada leh abuur abuuray.
Ka dib markii ay soo baxaan caleemaha caleemaha iyaga oo leh iyaga si ay u dhigaan labada koonfureed ama dhinaca bari ee aqalka. Haddii tani aysan macquul ahayn, ka dibna iftiiminta macmalka ee leh fitolamps gaar ah waa mid ku habboon.
Heerkulka hawada agagaarka geedo waa inuu ahaadaa + 20 + 25 ̊С. Picks waa in la sameeyaa ka dib markii waraaqaha ugu horreeya ee asaasi ah ay koraan asliga ah. Intaa waxaa dheer, geedo waa in lagu shubaa weel si ay u dhexeeyaan labada uhesho waa qiyaastii 2-3 cm.
Ka dib markii caleen shanaad la sameeyay, waxaa suurtogal ah in la dhimo geedo. Xilligan waa in qiyaastii ay ku beegantaa maalmaha ugu dambeeya May. Waxaa lagama maarmaan ah in ay hoos u dhacdo qaabka soo socda: 60 cm - masaafada u dhexeysa sariiro isku dhow, 15 cm - masaafada u dhexeysa duurka deriska ah.
Waxaad sidoo kale ku beeran kartaa strawberries si ka duwan, kuwaas oo ku jira 2 duurka ku faraxsan on sariir la mid ah.
Taasi waa, sariirku wuxuu ka kooban yahay laba saf, xuddunta u dhaxaysa 30 cm, masaafada u dhaxaysa dhirta 15 - 20 cm, iyo xariijimaha is xigta waa in laga soocaa 60 cm.
Marka la beero guga ama dayrta ayaa lagu talinayaa in la isticmaalo nidaamka labaad. Haddii aad qorshaynayso in aad geedo geedo ku darsato xagaaga, markaa waxaad u baahan tahay inaad tan sameyso, ka dib qaabka ugu horeeya.
Talooyin ku saabsan Queen Elizabeth
Wixii strawberries, qoyaanka ciidda waa mid aad u muhiim ah, sidaas darteed xagaaga, hawada kulul, waraabinta waa in la sameeyaa maalin kasta. Ka hor inta dhirta bilaabaan inay Bloom, waxaad codsan kartaa habka roobka ee waraabinta.
Ka dib bilowga ubax, biyaha ayaa u baahan doona in lagu shubo jeexjeexyada si aysan dhibic u dhici doonin midhaha iyo caleemaha. Waxa kale oo sidoo kale waa suurad wacan in dhulku dhul la dhoobo si loo yareeyo koritaanka cawska.
Ka dib toban ilaa laba iyo toban maalmood, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso sariiraha loogu talagalay badbaadada seedling. Geedooyinka kuwaas oo aan la isticmaali karin berrin furan waxay u baahnaan doonaan in laga saaro, iyo meel ay ku beeraan kuwa cusub.
Bacriminta waxaa lagu dabaqi karaa labadaba inta lagu jiro beerashada iyo inta lagu jiro mudada oo dhan koritaanka baadiyaha. Xaaladda kowaad ee sanadka gudaheeda ma noqon doonto lagama maarmaan in la quudiyo duurka. Haddii aan, ka dibna xilliga guga waxay noqon doontaa lagama maarmaan in ay dhulka ku sumoobo leh oo dhan dhan spain ee Bacriminta macdanta, taas oo ah, oo leh nitrogen, fosfooraska iyo potassium.
Ka dib markaad ka qaadato beergooyska duurka, geedi socodka diyaarinta ayaa bilaabmaa. Sidaa darteed waxaad u baahan doontaa quudiyo dhirta nystrofoskoy, iyo wixii ka dambeeya hoyga laga bilaabo jawiga xun iyo heerkulka hoos u dhacaya.
Cudurada ugu caamsan ee strawberry waa baadho goor dambe iyo wax xagta oo budada ah. Haddii aadan wax talaabo ah qaadin waqtigaa, waxaa jira khatar ah in beergooyinku si aad ah u xanuun badan, oo aadan helin saameynta la filayo.
Si looga hortago infekshanka budhcada budada ah ama si loo daaweeyo duurka, waxay lagama maarmaan u tahay in lagu daweeyo dhirta oo leh xal kolloid ah oo sulfur ama fungicides.
Daahfurka dabayshu wuxuu dhacaa marka uu jiro xaddi qoyaan ee ciidda, iyo sidoo kale haddii dhacdo in wax beerto uu ahaa mid hore u xun. Sidaa darteed, haddii aad u aragto caleemaha xun caleenta strawberries, waxaad isla markiiba u baahan doontaa inaad dhulka ku daadiso adoo adeegsanaya nidaam dheecaan leh.
Iyada oo habka nidaamsan ee strawberries sii kordhaya, wax dhibaato ah waa in ay soo baxaan.
Inta badan waxaad la shaqeysaa dhirtaas, waayo-aragnimada badan ee aad haysatid. Sidaas ha ahaato carmalka oo si geesinimo leh u beeraan duurka ee berrigan cajiibka ah on your site.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Strawberries 2020